सिटिजन्स बैंकको ६२औं शाखा मकवानपुरको मनहरीमा « Surya Khabar
काठमाण्डौ । नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्रमा अद्वितीय पहिचान बनाउन सफल रहेको यस सिटिजन्स बैंकले आफ्नो ६२औं शाखा मकवानपुरको मनहरीमा समुद्घाटन गरेको छ ।
मंगलबार बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेश राज पोखरेलले बैंकिङ्ग कारोवारको सरुवात गरेको छन् । उक्त समारोहमा जिल्लाका उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारी, उद्योगी, व्यापारी, विभिन्न संघ संस्थाका प्रमुख तथा नागरिक समाजका अगवाहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो ।
मनहरी शाखाको विधिवत समुदघाटन सँगै सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले ग्राहकमहानुभावहरुलाई देशभरी फैलिएका यस बैंकको ६२ वटा शाखा, ५९ वटा ए.टि.एम. काउन्टर र ९७ वटा शाखारहित आधुनिक बैंकिङ्ग सेवाहरूबाट करिव ३ लाख ५० हजार ग्राहकहरूलाई सेवाप्रदान गर्दै आएको छ । साथै आफ्नो ग्राहकवर्गहरूलाई रेमिट्यान्स सेवा, ड्राफ्ट, भिसा ए.टि.एम. कार्ड सेवा, भिसा इन्टरनेसनल डलर कार्ड सेवा, विभिन्न किसिमका निक्षेप तथा कर्जा सुविधाहरु साथै कुनै पनि शाखाबाट रकम भिक्न र राख्न सकिने जस्ता सुबिधाहरु पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।